गुप्तेश्वर गुफा भित्र कसरी जम्मा हुन्छ फोहोर ? - ParyatanBazar.com
गुप्तेश्वर गुफा भित्र कसरी जम्मा हुन्छ फोहोर ?
पर्यटन बजार१ मंसिर २०७८, बुधबार मा प्रकाशित
मंसिर २,पोखरा । पोखराका पर्यटकीय स्थलमध्ये एक हो गुप्तेश्वर गुफा। तर गुप्तेश्वर गुफामा बारम्बार जम्मा हुने फोहोरले भने पर्यटकको मनमा खिन्नता जगाउन थालेको छ । फेवातालको पानी निकास हुने क्रममा त्यहाँको फोहोर गुफा भित्र आएर जम्मा हुने गरेको हो ।
गुफा भित्र जम्मा हुने फोहोर समय समयमा सफा गरिने गुफा संरक्षण समितिका कार्यालय सहायक युवराज पराजुलिले बताए । यस फोहोरको विषयमा यहाँ पुग्ने प्राय पर्यटकले सोध्ने गरेको पराजुली बताउछन । यस फोहोरलाइ नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपाय अप्नाइए पनि सोचेअनुरुपको नतिजा आउन नसकेको उनको तर्क छ ।
समय मै यस गुफा मा जम्मा हुने फोहोरको नियन्त्रण नगरिए गुफाकै अस्तित्व दाउमा पर्न सक्ने स्थानीय रमेश थापा बताउछन।
के छ गुप्तेश्वर गुफा मा ?
जमीनबाट करिव १५० मीटर तल अवस्थित यस गुफाबाट पाताले छाँगोबाट खसेको झरना हेर्न सकिन्छ। दक्षिण एसियाका सबैभन्दा ठूला गुफाहरूमा पर्ने यो गुफाभित्र मन्दिरहरू र ठूलो खुला ठाउँ पनि रहेका छन्।
करिब २,००० मिटरको लम्बाइ भएको, गुप्तेश्वर महादेव गुफा (नेपालीमा भालु दुलो भनेर पनि चिनिन्छ)। स्थानीय किंवदन्ती अनुसार यो गुफा १६ औं शताब्दीमा फेला परेको थियो । गुफाको मुख्य गेट भर्खरै सन् १९९१ मा पूरा भएको थियो। डेभिस फलको पानी गुप्तेश्वर महादेव गुफा हुँदै बग्छ, जुन डेभिस फल नजिकै रहेको छ।
गुफा भित्र घुम्नको लागि आफ्नै टर्चलाइट ल्याउन सल्लाह दिइए पनि प्रशासनले उपयुक्त बत्ती राखेको छ। गुप्तेश्वर महादेव गुफा ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ तीर्थयात्रीहरू भगवान शिवको पूजा अर्चना गर्ने गर्छन् जहाँ फोटो खिच्न पुर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यस गुफामा महादेबको पुजा गरिने हुनाले यहाँ चैते दशैं र महाशिवरात्रि जस्ता चाडहरूमा ठूलो संख्यामा आगन्तुकहरुको उपस्थिति देखिने गर्दछ। जमिनमुनि घुम्दा दुर्लभ खनिज र तत्वहरू फेला पार्न सकिन्छ। गुफाहरू सधैं रहस्यमय देखिन्छन्, तर गुप्तेश्वर महादेव गुफा अद्वितीय छ किनभने यसको धार्मिक पृष्ठभूमि पनि छ। गुफाको शान्त वातावरणले जो कोहिको इन्द्रियहरूलाई शान्त पार्छ र केहि समयको लागि प्रतिबिम्बित गर्न अनुमति दिन्छ।
शहरको सामान्य भीडभाडको बीचमा केही शान्त समय बिताउनको लागि यो उत्कृष्ट स्थान हो।
हेलिकप्टर बाट पाथिभरा दर्शन गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
नेपालको पर्यटन श्रमिक आन्दोलन र यसको इतिहास !
Mundum Trek; New Destination in the East Nepal
अनुमती बिनै मेरा पिक हाइक्याम र बेसक्याममा बने घरटहरा